Ireo Mpanoratra Any Goatemala · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2018 15:18 GMT
(Marihina fa tamin'ny 26 Aprily 2007 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Sarotra ny zava-misy ho an'ny mpanoratra any amin'ny firenena iray izay ahitana ny olona mividy labiera sy gazetiboky ara-panatanjahantena bebe kokoa noho ny fividianana boky ary manana fiteny maromaro (ankoatra ny teny espaniola ), ary misy olona marobe tsy mahay mamaky teny. Ao amin'ny firenena izay tsy maintsy handoavana hetra ny boky, zara raha mamaky boky ny ankizy, eny fa na dia ho an'ireo tsy maintsy vakiana aza, ary tsy mampazoto ny ankizy ny fanaovana asa ho an'ny literatiora. Mahita ny ankamaroan'ireo mpanoratra fa tena sarotra ny mamoaka boky, ary mbola sarotra kokoa aza ny manao izany mba ahazoana tombony. Miasa ho mpanao gazety, mpandalina, injeniera ary manoratra tsy tapaka izy ireo matetika. Vitsy amin'izy ireo no tena manokana ny tontolo androny amin'ny fanoratana, ary ny ankamaroany dia tsy fantatra ao an-toerana.
Na izany aza, nahita ny fahafahana maneho hevitra manokana izy ireo tamin'ny alalan'ny famahanana bilaogy, mizara ny sangan'asany, ary mampiroborobo ny fahalianana eo amin'ny Goatemalteka, indrindra amin'ny tononkalo sy ny tantara fohy.
Ny tononkalo no mpitari-dalana amin'ny zavakanton'ny famahanana bilaogy, namahana bilaogy nanomboka tamin'ny taona 2005 Pablo Bromo ao amin'ny Bicicleta [ES]. Ireo poety hafa mamahana bilaogy dia Alejandro Marré ao amin'iny Marré v. Marré [ES] , Alan Mills sy ny revolver [ES], Gerardo Sandoval ao amin'ny “Palabras Mayores”, ary i Arnoldo Gálvez ao amin'ny “Tercer Perfil” [ES]
Manana ny sehatra azy manokana [ES] ilay mpanoratra tantara Ronald Flores, izay tsy ahitanao ny sangan'asany fotsiny ihany, fa ny tsikera, ny soso-kevitra ary ny fanehoan-kevitra momba ny boky iraisampirenena ihany koa.
Isaky ny alakamisy dia afaka mamaky sy maneho hevitra momba ny fitantarana an-gazety avy amin'i Maurice Echeverría ianao , mpanoratra Goatemalteka mbola tanora izy saingy tena mahomby tokoa ao amin'ny Buscando a Syd [ES].
Azonao atao ny mamaky an'i Claudia Navas na ao amin'ny Ordinaria Locura [ES] na ao amin'ny bilaogy iraisana antsoina hoe Panoptico Literario [ES]. Wingston González [ES], tanora Goatemalteka mpanoratra iray izay vao nanomboka ny blaoginy ALFILER [ES], tetikasa iombonana ho an'ny e-books sy ny tsikera ao amin'ny bilaogy antsoina hoe LIBROS MINIMOS [ES] (boky kely), ary ahitana ireo bilaogera mpanoratra mizara ny lahatsorany ary maneho hevitra ao amin'ny bilaoginy.
Ny fampiasana ny teknolojia sy ny sehatra toy ny bilaogy no tsara ho marihina mba hampiroboroboan'izy ireo ny kolontsaina, ary ahafahany misarika ireo mpamaky tanora sy mizara ny heviny manerana izao tontolo izao ihany koa. Efa namoaka boky iray farafahakeliny izy rehetra, ary efa nahazo loka tamin'ny literatiora maro sy mari-pankasitrahana tamin'ny boky. Ampiasainy ihany koa ny tontolon'ny bilaogy mba hizarany ny sangan'asany, izay misokatra tanteraka ho an'ny mpitsikera mba hananganana kolontsaina vaovao sy malalaka ao Goatemala, ary hamelana izao tontolo izao hahafantatra ny zavatra lazainy ao amin'ny blaoginy.